Arduino mmemme nkuzi | Akụrụngwa n'efu
Arduino mmemme nkuzi
Arduino O nwere ike ịbụ otu n'ime ngwanrọ ngwanrọ na ngwanrọ na-aga nke ọma ma ọ bụ nyiwe na nke nwere mmetụta kachasị na ụwa Mee N'onwe Gị. Ndị obodo emepụtala ngwanrọ mepere emepe maka mmemme nke microcontroller nke mbadamba, yana ogwe ngwaike dị iche iche nwekwara onwe ha ịrụ ọrụ. All ikikere n'okpuru GNU GPL ikike nke mere na a nwekwara ọtụtụ ndị tinye-ons na nkwekọrịta nke ha.
N'ezie, ha akpọteela ụlọ ọrụ eletrọniki niile na ọtụtụ ngwa, okpu ma ọ bụ ọta Site na nke ị nwere ike ịgbatị ikike nke Arduino gị karịa ọrụ ya nke ọ na-arụ dị ka ọkọlọtọ. Emekwala ọtụtụ ngwa iji malite ma ọ bụ rụọ ọrụ akọwapụtara nke ọma, dịka ngwa maka robotik, ngwa maka ọrụ nwere ike anyanwụ, ngwa ngwa mmalite, wdg.
1 Kedu ụdị efere dị?
2 Kedu ihe m kwesịrị ịmalite?
3 Arduino mmemme nkuzi:
3.1 Kedu ihe faịlụ nbudata ahụ gụnyere?
3.2 Budata eBook n'efu ma tinye:
Kedu ụdị efere dị?
Enwere dị iche iche na ngalaba Arduino, ọ bụ ezie na ịmalite M na-akwado iji ya Arduino UNO, nke bụ ihe m na-eji dị ka ihe ndabere maka nkuzi. Efere dị iche iche kachasị pụta ìhè bụ:
Arduino UNO Mkpu 3: ọ bụ ihe kachasị agbanwe agbanwe na nke eji mee ihe niile, nke a tụrụ aro ka ịmalite. O nwere igwe microcontroller 328Mhz ATmega16, 2KB nke SRAM na 32KB nke flash, mkpọchi I / O dijitalụ 14 na ntinye analog 6.
Arduino N'ihi: O nwere igwe ntanye AT91SAM3X8E nke nwere 84 Mhz, 96KB nke SRAM, na 512 KB nke ọkụ, yabụ ị ga-enwe ike ịdekọ mmemme ndị ọzọ dị mgbagwoju anya maka nnukwu ọrụ. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-ahụ njikọ I / O dijitalụ 54 na ntinye analog 12 + ntinye analog 2.
Arduino Mega: ATmega2560 16Mhz microcontroller, 8KB nke SRAM, 256KB nke flash, 54 digital I / O pin na ntinye analog 16. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-abụ usoro nke etiti n'etiti etiti na UNO, maka ọrụ nke mgbagwoju anya n'etiti.
Nduzi Onwuka: Obere, efere okirikiri nke na-agbanwe maka ọrụ e-textile gị, ya bụ, akwa nke ị nwere ike iyi uwe. Ọ bụ labable.
Micro Arduino: Ọ bụ obere mbadamba nwere microcontroller nke nwere ike ịba uru mgbe ohere bụ isi ihe dị mkpa na ịchọrọ osisi nke na-ewe obere ohere iji tinye ya n'ime obere oghere. E nwere Pro mbipute ya na enwekwukwa ike. Ọ gụnyere microMtrol 32Mhz ATmega4U16, yana 20 I / O pin ka ị ga-agbanye.
Arduino nano: ọ bụ ọbụna obere mbadamba karịa Micro, mana ya na atụmatụ na ọnụahịa yiri ya, yana ATmega328 microcontroller.
Arduino Esplora: Ọ dị ntakịrị karịa ọtụtụ n'ime ndị gara aga, ọ dabere na Leonardo oge ochie, nke nwere ikike yiri nke UNO na nke bụ efere mbụ pụtara. Ma e megharịrị atụmatụ ya, belata ma dị iche na ụfọdụ bọtịnụ, obere ọystụ, na ihe mmetụta abanyela na bọọdụ. Ya mere, ọ bụ ihe na-akpali mmasị maka ọrụ egwuregwu.
Ga-ahụkwa unofficial efere, nke ndi obodo ma obu ndi oru ndi ozo mebere. Njirimara ha nwere ike iyi oke, na dakọtara na Arduino n'ihe gbasara mmemme ma ọ bụ larịị elektrọnik, mana anyị ahapụgoro nke ahụ dịka nhọrọ ị họọrọ. Anaghị m akwado ka ịmalite na mbadamba ihe ndị a n'ụzọ ọ bụla, n'ihi na enwere ike ịnwe ụfọdụ ihe na-ekwekọghị na ị gaghị achọta enyemaka dị ukwuu. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime ha bụ kpọmkwem maka robotik, drones, wdg.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ngwa eletriki nke ahụ ga-enye gị Arduino osisi ikike ndị ọzọ, dị ka njikọta WiFi, Bluetooth, ndị ọkwọ ụgbọala iji chịkwaa motọ, wdg. Fọdụ ndị ọmarịcha ọta bụ:
Shield WiFi: iji tinye njikọta WiFi na inwe ike jikọọ ọrụ gị na tontanetị iji jikwaa ya nke ọma.
Ọta GSM: maka njikọta data mkpanaka.
Ọta Ethernet- Wired njikọ na netwọk.
Ọta Proto: na-enye gị ohere iji bredboard maka ihe ị na-emepụta.
Na otutu ọzọ, dị ka ihuenyo, kiiboodu, ...
Na ụkpụrụ, maka bido, Echeghị m na ị nwere ike nwee mmasị n'ụdị ihe a, agbanyeghị na ị ga-achọ ya ma emechaa.
Kedu ihe m kwesịrị ịmalite?
Iji maliteM na-adụ gị ọdụ ka ị nweta ihe ndị a:
Arduino Starter Kit: ọ bụ ngwugwu zuru oke nke nwere efere Arduino UNO, akwụkwọ ntuziaka zuru oke na ọtụtụ ihe elektrọnik dị iche iche iji rụọ ọrụ (ndị na-eguzogide, ndị na-arụ ọrụ, ihe ntanetị, ihe ngosi, bọọdụ bred, LEDs, cables, diodes, transistors, buzzers, motors and servomotors, drivers, etc.).
Ọ bụrụ n'ịhọrọ ịzụta otu efere ahụ ekwuru n'elu, buru n'uche na ị ga-enweta ya ihe eletriki dị mkpa maka ọrụ ọ bụla n'onwe gị na ụlọ ahịa pụrụ iche… Ọ ga-ekwe omume na ozugbo ị na-erigbu ngwa ngwa ahụ, ị ​​nwere mmasị ịzụrụ ihe iji gaa n'ihu ịgbasa ọrụ gị ma ọ bụ ime ihe karịrị ihe kit a na-enye gị.
E wezụga nke anụ ahụ, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ịnwe ngwanrọ zuru oke:
IDE Arduino: ị nwere ike budata ya maka usoro ntanetị dị iche iche n'efu. Na nkuzi PDF ana m akọwa otu esi etinye ya na sistemụ arụmọrụ ọ bụla yana otu o si arụ ọrụ.
Ardublock: bụ ngwa mgbakwunye ọzọ na Java maka ọtụtụ nyiwe nke nwekwara ike ịbụ ebudatara n'efu. Ọ na - enye gị ohere ịrụ ọrụ nke ọma, ya bụ, iji blọk ndị yiri ihe mgbagwoju anya iji mepụta mmemme gị n’agaghị iji asụsụ mmemme. A kọwakwara ihe a niile na PDF.
Na-egbu mmụọ: bụ mmemme na - enye gị ohere ịme mmegharị ma ọ bụ ndapụta nke sekit gị tupu ị gbakọta ha. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-agụnye ọtụtụ ihe n'etiti ọba akwụkwọ ya. Download ya ebe a.
Na nke ahụ, ị ​​ga - enwe karịa ezu ịmalite…
Arduino mmemme nkuzi:
Agbanyeghị na ikpo okwu a na-agba ọsọ kemgbe ọtụtụ afọ, enwere ike inwe ọtụtụ ndị na-eto eto ma ọ bụ karịa ndị na-eto eto na-agụ anyị ugbu a ma chọọ iso nnukwu obodo nke ndị na-eme ọrụ na -emepụta ọrụ dabere na Arduino n'oge ahụ. Yabụ, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmalite ịmụ ihe n’ ime mmemme site na ncha ma site na nzo, m na-enye gị a ebook n'efu na mmemme Arduino. Na ya ị ga-amụta ihe niile ịchọrọ iji bido iwu ụlọ mbụ gị ...
Kedu ihe faịlụ nbudata ahụ gụnyere?
N'ime Budata ZIP ị ga-ahụ ọtụtụ faịlụ iji rụọ ọrụ:
eBook na nkuzi Arduino IDE na Ardublock mmemme na PDF ọkọlọtọ iji nwee ike iji ya na PC gị.
eBook yiri nke gara aga, mana nke pere mpe na fechaa iji site na mkpanaka gị na ngwaọrụ.
Download njikọ na mmemme dị mkpa.
Otu nchekwa dị iche iche osisi isi iyi faịlụ na ị nwere ike ịnwale dị ka ihe atụ ma ọ bụ gbanwee iji mụta. Enwere koodu abụọ maka Arduino IDE yana ndị ọzọ maka Ardublock yana ọbụlagodi koodu maka ịrụkọ ọrụ na Raspberry Pi.
Budata eBook n'efu ma tinye:
Malite nbudata Ebe a:
Enwere m olileanya na ọ ga - enyere gị aka ma ịmalite ịbụ onye mepụtara ya ọrụ izizi gị. Nwere ike ịhapụ nkọwa na atụmatụ mbụ gị ma soro anyị kerịta ihe okike gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Arduino mmemme nkuzi
Ekele Gị N'ehihie:
Ikwesiri ime nyocha nke na - ewe ụkpụrụ abuo nke Capacitor na nguzogide na ala C = 470Mfx50V, R = 330k 1 / 4W, nke a na - ejikọ na ntinye na mbupute 3.5 AUDIO Jack
Site na Ajụjụ 3.5
Ajụjụ na arduino enwere ike ịme ihe ga - eme ma wepụta ụkpụrụ,
M na-amalite na m bu n'obi iji nweta ezigbo ihe
Zaghachi Mario Piñones c.
eme 2 izu
Nbudata Arduino EBOOK gị anaghị arụ ọrụ
eme 1 izu
M nnọọ gbalịrị na ọ na-arụ ọrụ maka m. Ọ bụ eziokwu na mgbasa ozi na-ebu ụzọ pụta.
Mana oge nke abụọ ị pịa njikọ ọ na-ebudata.
Arduino + relay modul na nkume & mpịakọta: agwakọta AC / DC
Mee igwefoto gi pinhole gi